Ogya fi Yehowa hɔ bɛhyew Nadab ne Abihu (1-7)
Nsã ne aduan ho akwankyerɛ a wɔde maa asɔfo no (8-20)
10 Akyiri yi, Aaron mma Nadab ne Abihu+ de nkankyee a wɔde ogya gu mu bae, na wɔde ogya guu mu. Afei wɔde aduhuam+ guu so na wɔhyew biribi wɔ Yehowa anim a na ɔmmaa ho kwan.+ 2 Ɛnna ogya fi Yehowa hɔ bɛhyew wɔn,+ na wowuwui wɔ Yehowa anim.+ 3 Afei Mose ka kyerɛɛ Aaron sɛ: “Nea Yehowa aka ni, ‘Wɔn a wɔbɛn me no, ɛsɛ sɛ wohu sɛ meyɛ kronkron,+ na wɔhyɛ me anuonyam wɔ ɔman no nyinaa anim.’” Na Aaron yɛɛ komm. 4 Enti Mose frɛɛ Aaron papa nua Usiel+ mma Misael ne Elisafan, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mommra mmɛfa mo nuanom mfi kronkronbea no anim nkɔ asoɛe no akyi.” 5 Wɔbɛfaa wɔn kɔɔ asoɛe no akyi sɛnea Mose kae no. Saa bere no nyinaa na wɔn ntaade tenten no hyehyɛ wɔn. 6 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ Aaron ne ne mma a wɔaka, Eleasar ne Itamar sɛ: “Monhwɛ na moannyaw mo ti nwi basaa anaa moannsunsuan mo ntaade mu+ anni awerɛhow, anyɛ saa a, mubewu, na Onyankopɔn bo befuw asafo no nyinaa. Wɔn a Yehowa de ogya akum wɔn yi, mo nuanom Israelfo nyinaa besu wɔn. 7 Montena mmɛn ahyiae ntamadan no kwan ano; mummfi hɔ nnkɔ baabiara na moanwu, efisɛ Yehowa srango wɔ mo so.”+ Enti wɔyɛɛ nea Mose kae no. 8 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Aaron sɛ: 9 “Bere biara a wo ne wo mma bɛba ahyiae ntamadan no mu no, monnnom bobesa anaa nsã foforo biara a ɛbow+ na moanwu. Eyi yɛ ahyɛde a mo ne mo nkyirimma* bedi so daa. 10 Ɛbɛma wɔahu nsonsonoe a ɛda ade kronkron ne nea ɛho agu fĩ ntam, ne nea ɛho tew ne nea ɛho ntew ntam.+ 11 Afei nso, ɛbɛma moatumi de ahyɛde a Yehowa nam Mose so de maa Israelfo no nyinaa akyerɛkyerɛ wɔn.”+ 12 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ Aaron ne ne mma a wɔaka, Eleasar ne Itamar sɛ: “Aduan afɔre a wɔde ogya hyew maa Yehowa no, momfa nea aka no ntõ paanoo a mmɔkaw* nnim, na munni wɔ afɔremuka no ho,+ efisɛ ɛyɛ ade kronkron paa.+ 13 Munni wɔ baabi a ɛhɔ yɛ kronkron,+ efisɛ ɛyɛ wo ne wo mma kyɛfa a efi afɔre a wɔde ogya hyew ma Yehowa no mu. Ɛno ne ahyɛde a me nsa kae. 14 Wo ne wo mma mmarima ne wo mma mmea a wɔka wo ho+ no bɛwe aboa no koko a wohim de bɔɔ afɔre no ne ne nan a ɛyɛ afɔrebɔde kronkron+ no wɔ baabi a ɛhɔ yɛ kronkron, efisɛ ɛyɛ wo ne wo mma kyɛfa a efi Israelfo asomdwoe afɔre mu. 15 Na ma wɔmfa aboa no nan a ɛyɛ afɔrebɔde kronkron no ne ne koko a wobehim de abɔ afɔre no ne aboa no srade a wɔde ogya bɛhyew no mmra, na wonhim wɔ Yehowa anim. Aboa no nan ne ne koko no bɛyɛ wo ne wo mma a wɔka wo ho no kyɛfa daa,+ sɛnea Yehowa aka no.” 16 Mose hwehwɛɛ baabiara sɛ obehu apɔnkye a wɔde bɛbɔɔ bɔne ho afɔre+ no nam, nanso ohui sɛ wɔahyew ne nyinaa. Enti ne bo fuw Aaron mma a wɔaka, Eleasar ne Itamar, na ɔkae sɛ: 17 “Adɛn nti na moanwe aboa a wɔde bɔɔ bɔne ho afɔre no nam wɔ baabi a ɛhɔ yɛ kronkron no?+ Munnim sɛ ɛyɛ ade kronkron paa a ɔde ama mo sɛnea ɛbɛyɛ a mubegye asafo no bɔne na moapata ama wɔn wɔ Yehowa anim? 18 Wɔamfa aboa no mogya ankɔ kronkronbea hɔ,+ enti anka ɛsɛ sɛ mowe ne nam wɔ baabi a ɛhɔ yɛ kronkron, sɛnea wɔka kyerɛɛ me no.” 19 Ɛnna Aaron ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Ɛnnɛ wɔde nea wɔde bɛbɔ bɔne ho afɔre ne ɔhyew afɔre aba Yehowa anim,+ nanso hwɛ asɛm a ato me. Sɛ mewee aboa a wɔde bɔɔ bɔne ho afɔre no nnɛ a, anka ɛbɛma Yehowa ani agye anaa?” 20 Bere a Mose tee eyi no, ne bo tɔɔ ne yam.